Namuhla, emakethe ugcwele ezihlukahlukene amanzi Ukushisa imishini, okuhlanganisa kanye kubhayela kagesi. Kukhona futhi abakhiqizi abaningi ukwakha lo imikhiqizo kagesi. Kodwa uyini umehluko phakathi kwalokhu? Phela, injongo eyinhloko amanzi kubhayela uyabaselwa, futhi ngaleyo ndlela ukwakhiwa kohlelo kumele kube esifanayo. Kodwa kulokho amanani ehlukene kangaka? Ake sibheke lokhu nokunye okuningi.
kubhayela Electric: idivayisi
ELITJHUMI - isisekelo iyiphi kubhayela. Ngosizo amanzi awo Ukushisa kwenzeka. sici yakhe ngqo ethangini - ithangi. Heater ungasebenza izindlela ezehlukene. Konke kuncike lapho izilungiselelo banikezwa thermostat. Kuchaza izinga lokushisa oyifunayo lapho amanzi kufanele lizwakale linemfudumalo. Imvama, kuba esezingeni 35 kuya kwangu-90 degrees Celsius (Fahrenheit futhi ingasetshenziswa - kuncike ejwayelekile nesimo). Electric Ukushisa izakhi bayakwazi ngokuzimela ukufuthelana amanzi lapho lokushisa yayo uwela uphawu oluthile (heater kagesi ongagcina umsebenzi ngokuchaza lokhu lokushisa).
Omunye umehluko oyinhloko ekuklanyweni kubhayela ukusetshenziswa material thermally nangokuvikela, okuyinto ifakwe umzimba ukufakwa. zifudumele ngokuvamile ibekwe emhlabeni wonke nentaba ethangini, kubaluleke kakhulu ukuba isitoreji lokushisa eside kakade amanzi ukufuthelana, kanye ngaphezulu Ukushisa okusheshayo ke.
Njalo kubhayela kagesi has zayo siqu langempela amandla afinyelela ku 2 kW. Ngenxa yokuthi amanzi kungaba akukwenzi kweso, kubalulekile ukuba kahle ukhethe isilinganiso tank umthamo / amandla bafudumale isici, ukuze idivayisi anganikeza siwuthole njalo amanzi ashisayo.
kubhayela Electric: ivolumu ethangini
Kuye ngalokho umthamo wamanzi kudliwe nsuku zonke, ivolumu ethangini kuyakhethwa. Flow Ukukala incike isibalo sabantu emkhayeni, njengoba exhunywe kwi imishini eyengeziwe usebenzisa amanzi ashisayo futhi njengoba kukhona amaphuzu eyanele. Ngokwesibonelo, boilers 200 amalitha, kungenzeka ibe nkulu kakhulu ngoba eshaweni noma ekhishini amakamelo, ngesikhathi esifanayo, baba Site yokwamukela nokugeza.
Uma isibalo sabantu emkhayeni likhulu, khona-ke kuwukuhlakanipha ukubeka inani kubhayela okufanayo, isibonelo, omunye ekhishini nokukodwa egumbini lokugezela. Ngakho kungenzeka ukugwema nokuntuleka kwamanzi ashisayo.
kubhayela Electric: umehluko njengoba
Quality - cishe izici asemqoka okudingeka ukuba banake kwasekuqaleni. Umehluko Intengo kusuka abakhiqizi imbangi kakhulu incike le nkomba. Ngakho, izinga kudivayisi kubonakala elandelayo:
Nokwethenjelwa izingxenye kagesi kanye lokukhanda.
Ukuphumelela esebenzile ukushisa ekuvikeleni impahla.
Alloys ngezinto elenziwe i kubhayela kukagesi nezinye izikhathi.
Intengo ingase futhi ngokuya nesakhiwo nezimpawu zokuhlela imishini. Ngokwesibonelo, ongaphandle kubhayela kagesi ungase ube izindleko kancane ngaphansana udonga ukubukeka kwayo. brand kwabakhiqizi, yebo, kuthinta kakhulu ke. Ngokwesibonelo, izinkampani ehamba phambili German yokukhiqiza lezi amadivaysi isikhathi eside futhi emakethe ngeke give up imikhiqizo yabo ngentengo ephansi kunalokho ungenza umkhiqizi Chinese noma isi-Turkish. Ngisho noma leyo mibono zonke izinkomba ngenhla, kodwa amaJalimane zithatha nokwethenjelwa izinga.
Indlela ukufaka kahle ukuhlunga?
Angiography: okungukuthi, incazelo izinqubo netimphawu
Toyota Surf - iveni zasendlini ngempela off-road adventure
Pancake ezazigxishwe ham noshizi
Psoriasis: Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa
Itiye "Pohudin" (amafutha evutha eziyinkimbinkimbi): Izibuyekezo ngakho kwaba nabantu bezizwe ezixubile umkhiqizo
Ingcindezi High - can nomfutho wegazi ophezulu